Wasiirka Arrimaha dibedda XFS “Kiiska dacwadda Badda ee inaga dhexeeya Kenya, waxa uu inoo joogaa Maxkamadda caalamiga ah ee Hegue” – Radio Muqdisho
Wasiirka Arrimaha dibedda XFS “Kiiska dacwadda Badda ee inaga dhexeeya Kenya, waxa uu inoo joogaa Maxkamadda caalamiga ah ee Hegue”
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuusan jirin wada xaajood ay Kenya kala yeelatay Dowladda Soomaaliya dacwadda Badda ee horay loo geeyey Maxkamadda caalamigaah ee Hegue.
Amb; Cawad ayaa xaqiijiyey inaanu jirin wax wada hadal rasmi ah oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka yeesheen in waddo aan Maxkamadda Hegue ahayn lagu xalliyo khilaafka Soohdinta Badda ee Labada Dal ka dhexeeya.
“Kiiska dacwadda Badda ee inaga dhexeeya Kenya, waxa uu inoo joogaa
maxkamadda caalamiga ah ee Hegue, waxaan idiin xaqiijinayaa inaanu
jirin wax intaas ka baddalan oo Kenya na dhex maray, ingoo ixtiraamayna darisnimada naga dhaxaysa” ayuu yiri Mudane Cawad.
Hadalka wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa jawaab u ah wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma, oo todobaadkan sheegtay inay jiraan wadahal ay madaxda Soomaaliya kala yeesheen arrimaha muranka Badda.
Ciidanka xoogga Dalka oo degaanna badan ka saaran Al-Shabaab
Safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika oo deeq gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool dalkaasi+Sawirro